Semalt: Nei zvirimo Zvakakosha kune SEO?
Zvemukati uye SEO: Iyo Ukama
Kusikwa kweakagadziriswa Zvinyorwa
Kugadzirisa Izvo Zvakasikwa Zviripo
Semalt Copywriters Vanopa Injini yekutsvaga Inogadziriswa Yakagadziriswa Iyo Nzvimbo
Iwe unogona kunge wakambonzwa mutsara uyu kakawanda, asi wakamboedza kutsvaga kuti nei vanodaidza mambo.
Imhaka yekuti zvirimo zvine simba rekusimudzira mamiriro ewebhusaiti muSERPs (Tsvaga Injini Yekutsvaga Mapeji).
Zvakanaka, rinongova bedzi rutivi rwakajeka. Kana paine zvinokanganiswa mune zvemukati, zvinogona kukwezva Google zvirango uye kubaya webhusaiti yako kunze kwemukaka.
Ichi chinyorwa chinokubatsira iwe kunzwisisa zviri mukati, SEO, nei zvirimo zvakakosha neSEO, zvaunogona kuita kuti uwedzere kunaka kwemukati, uye zvimwe zvakawanda.
Chikamu chekupedzisira chinosanganisirawo mhinduro yekushamisika iyo inogona kubatsira izvo zvemukati zvinopfuura vakwikwidzi uye chinzvimbo chepamusoro mukutsvaga kwekutsvaga.
Zvemukati chero chidimbu cheruzivo chine chinangwa chaunopa kune vateereri vako kuburikidza nechiteshi. Iyi ruzivo inogona kuva chero chinhu uye chero chimiro.
Inogona kuve mameseji, mufananidzo, vhidhiyo, GIF, webinar, vhidhiyo yehupenyu, kana chero chinhu chipi zvacho pane webhusaiti, yemagariro midhiya chiteshi, application (web uye nharembozha), kana chero kupi zvako.
Kuti unzwisise zvirinani, ona izvi zvirevo zvemashoko kubva kune anopfuura makumi mana nyanzvi muDhijitari yekushambadzira Indasitiri.
SEO (Injini Yekutsvaga Optimization) ndiyo maitiro ekuvandudza iwo huwandu uye huwandu hweiyo organic traffic yako webhusaiti inogamuchira kuburikidza neinjini dzekutsvaga.
Kana, sewewe wese muridzi webhusaiti, chinangwa chako ndechekugadzirisawo webhusaiti yako panzvimbo yepamusoro paSERPs (Tsvaga Injini Yekutsvaga Mapeji), SEO ichabatsira.
Nhasi, SEO inotenderera neGoogle. Nekudaro, usashushikana kana mumwe munhu akada kukwidziridza webhusaiti yako maererano neGoogle.
Kuti udzidze zvakawanda nezve SEO, nheyo yayo inoshanda, mhando dzayo, uye zvimwe zvinhu zvinoenderana, enda neiyi inofanirwa-kurongedza SEO gwaro revatambi naSemalt.
Chinangwa cheyese yekutsvaga injini ndechekupa yakakodzera uye inobatsira mhedzisiro nekukurumidza. Asi vanoziva sei kuti mhedzisiro yacho inokodzera uye inobatsira?
Zvakanaka, pane algorithms yekuona kana mhedzisiro inogona kutungamira vashandisi kune yakakosha zvemukati kana kwete. Kana injini dzekutsvaga dzikaratidza kuti chidimbu chemukati chinogona kupa kukosha kwakanyanya, vanoriisa pakutanga.
Kutsvaga Injini Optimized Zviri mukati
Injini yekutsvagisa yakagadziriswa, kana yakakwirira-mhando zvemukati, iyo chidimbu chemafuta ekutsvaga injini vanoziva chaizopa kukosha kune vanotsvaga. Izvo zvemukati zvinonyanya kukosheswa maererano neyekutsvaisa injini yekutanga.
Ngatiti iwe watanga kutsvaga kwekutsvaga eco-hushamwari zvigadzirwa paGoogle. Mukati meisingasviki sekondi, rondedzero ichaonekwa pachiratidziro chako chine mhinduro dzinobatsira.
Mhedzisiro yekutanga pane ino rondedzero inonyanya kutsvaga injini yakagadziriswa.
Izvo zvikamu zveS injini yekutsvaga Optimized Zviri mukati
Kuzivikanwa nekushandurwa kwezvikamu zvakasiyana zvemukati sarudza kuti zvingave zvepamusoro mumhedzisiro yekutsvaga kana kwete.
Hezvino zvikamu zvekutanga zveyese yekutsvaga injini yakagadziriswa zvemukati:
Kana iwe uchitarisira izvi zvikamu, injini dzekutsvaga dzinozivisa zvako zvemukati sekwakakosha uye zvinongedza pakutanga. Ngavanzwisise chimwe nechimwe.
Ruzivo ichokwadi nezve mumwe munhu kana chimwe chinhu chaunoda kupa kune vateereri vako. Inogona kunge iri muchimiro chemashoko, nhamba, mirairo, kuraira, kutungamira, kana chero chinhu chaunoda kuupa.
Ita shuwa kuti ruzivo rwamunopa rwakanyatso uye haruvhiringidze vateereri vako.
Chinangwa ndicho chikonzero chekutumira ruzivo urwu kunze. Zvinogona kuve kudzidzisa, kuzivisa, kuzviita mukurumbira, kutanga bhizinesi rako, kana chero chinhu chipi zvacho. Chinangwa chinosanganisirawo zvaunotarisira mushure mekupa iwo ruzivo kune vateereri.
Ita shuwa iwe unogadzira ruzivo nenzira zvekuti inobatana nevateereri uye inosangana nezvinangwa zvako.
Audience ndiye munhu anotarisirwa kana boka revanhu raunoda kugamuchira ruzivo. Kuvavarira vateereri chaivo kunokubatsira kuti uise zvinhu senge zvinhu, toni, uye kutaridzika kwemashoko aunoshuvira kupa.
Ziva vateereri vako, zvavanoda, matambudziko avari kutarisana nawo, uye mibvunzo yavanogona kubvunza mushure mekuwana ruzivo rwako. Dhizaina zviri mukati mevateereri vako, kwete chimwe chinhu.
Fomu ndiko kutarisa kwekupedzisira kwemashoko kana iwe uchizozivisa kune vateereri vako. Tsvaga kuti vateereri vako vaizozvinzwisisa sei - nemhando yechinyorwa, mufananidzo, terevhizheni, kana vhidhiyo.
Kutanga, sarudza rudzi rwemukati menyaya yako - inodzidzisa, yemanzwiro, yakakomba, kana inosetsa. Wobva wasarudza nzira yaunoda kuiratidza.
Channel ndiyo yepakati iyo iyo ruzivo rwako runosvika kune vateereri. Iyo inogona kuve webhusaiti, bhurogu, social media platform, nhare mbozha, terevhizheni, bepanhau, kana chero chinogona kutaura zviri nani nevateereri vako.
Ita shuwa kuti zvemukati zviripo pane zviteshi panotarisana nevateereri vako nguva yakawanda.
Yakagadziriswa zvemukati yakakosha nekuti inozobatsira yako webhusaiti dhigirii yepamusoro mumitsva yekutsvaga injini mapeji. Izvo zvakare zvichavandudza kutaridzika kwako pane internet.
Ndichiri kugadzira zvirimo zvemhando yepamusoro, ita shuwa kuti iri pakati pezvinodiwa zvevateereri vako, uye zvese zvikamu zveinjini yekutsvaga yakagadziridzwa zvinotarisirwa zvakanaka.
Zvakare, iwe unofanirwa kufunga nezve dzinoverengeka zvigadzirwa zvakadai sema keywords, URLs, meta tsananguro, meta mazita, nevamwe.
Pane matanho mashoma anofanirwa kutevedzwa nemunhu wese paunenge uchigadzira zvemhando yepamusoro. Vari:
1. Keyword Kutsvaga
Keyword research ndicho chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita nekuti iwo chete akakosha mazwi anovimbisa kuti zvirimo zvinowanikwa kuburikidza nekutsvaga mhinduro.
Paunenge uchitsvaga, edza kudzivirira zvakanyanya kukwikwidza mazwi uye sarudza refu-muswe keywords. Iwe unogona zvakare kutora rubatsiro rwechishandiso chakakosha chirevo chekutsvaga, senge Keyword Kuronga kubva kuGoogle.
2. Gumisa Musoro
Mushure mekusarudza akakosha mameseji, iwe unofanirwa kupedzisa musoro wenyaya yako zvemukati. Nezve chinzvimbo chepamusoro, zvakakosha kuti uenzanise musoro neako mazwi akakosha. Mune mamwe mazwi, yako musoro inofanirwa kuve neiyo yakakosha.
3. Gadzira Pepa rehurukuro
Zvino, iwe unofanirwa kugadzira pepa rezvinhu zvese zvirimo. Sarudza musoro, vangani misoro midiki, zvinoonekwa uye mushure memashoko mangani.
4. Ita kuti ive nyore kuverenga
Ita kuti zvinyorwa zvako zvive nyore kuverenga nekuzvipwanya muzvikamu zvidiki zvemitsara 1-2. Wedzera zvinoratidzwa / misoro miduku mushure memamwe mazwi zana nemakumi mashanu nemairi.
Vaverengi vanoshandisa shoma shoma nguva pane peji rewebhu. Kana vaona hapana chinonakidza kunamatira, vanobva vaenda.
5. Usaderedze kubva Pamusoro
Paunenge uchigadzira izvo zviri mukati, namatira kumusoro. Izvo hazvidikanwe kuti ubatanidze zvese mune chimwe chidimbu chemukati. Tarisa pane chinyorwa uye edza kuti chichibatsira.
6. Namatira ku Target Keyword
Zvemukati menyu zvinofanirwa kunge zviri pakati peshoko rako rekutanga. Kana iwe uchida kuti zvemukati zvigone kutanga, namatira kune yako yekutanga keyword uye usatarise mazwi mazhinji.
7. Sanganisira zvinongedzo
Injini dzekutsvaga dzinoziva kuti zvemukati zviripo zvakavimbika kana paine zvinongedzo kumawebhusaiti akakodzera, akavimbika, uye ane masimba. Ita shuwa kuti mazwi aunoshandisa kugadzira maratidziro anoenderana nesaiti yakarairwa.
Semuenzaniso, ona chinongedzo pazasi chine zita rekuti 'SEO nhungamiro yevatanga.' Paunodzvanya pane iyi link, inotungamira kune webhusaiti yeSemalt, kwaunowana chinhu chimwe chete chakataurwa muiyi link.
Kugadzirisa izvo zvakagadzirwa zvinoreva kuti urikupinda mune yehunyanzvi hwekugadziriswa kwemukati.
Inosanganisira optimizing zvinotevera:
Ngatinzwisisei chimwe nechimwe:
Iyo URL chimiro chewebhu peji ndiyo yekutanga chinhu chekutsvaga vashandisi. Kana URL yako isinei nekiyi yakakosha, mikana ndeyekuti vashandisi vanogona kushanyira yako saiti.
Iyo isinganzwisisike uye yakareba URL inowanzovhundutsa vashandisi, uye vanozeza kubaya pane iyi link. Nzwisisa neaya matatu maratidziro akataurwa pazasi:
https://semalt.com/fullseo - Vashandisi vanobva vanzwisisa kuti iyi link ichavatumira kune peji reSemalt webhusaiti ine ruzivo nezve FullSEO. Ivo havazenguriri kudzvanya pazviri.
https://www.nytimes.com/2008/06/27/technology/27google.html? ruzivo rwune chekuita neSEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Vashandisi havanzwisise kuti chinongedzo ichi ndechei. Saka, vanozeza kudzvanya pazviri.
Musoro weti tema ndiyo musoro wenyaya (unodzvanya) waunoona mukutsvaga mhinduro. Vanobatsira Google, uye dzimwe injini dzekutsvaga, kunzwisisa zvirimo.
Dhagi mamaki ndidzo zvakare danho rekufunga kana vashandisi vachifanirwa kusarudza yakanyatsoenderana nekutsvaga mhinduro. Funga nezve izvi zvinhu zvina zvakakosha paunenge uchigadzirisa zita rematagi:
Iva wakananga paunenge uchigadzira zita remusoro.
Usaite zvinhu zvemusoro wedhisiki nemakiyi mazhinji.
Ita shuwa haipfuure makumi matanhatu.
Chinongedzo chakakosha izwi rinofanira kunge riri pakutanga.
Iro runyoro runyoro rwekutsvaira iwe rwaunoona pazasi remusoro weti / unodzvanywa musoro wenyaya uye URL inonzi Meta tsananguro.
Iyo inodzidzisa uye kune-iyo-nhanho meta tsananguro ine yakagadzirirwa keyword inokwezva zvimwe kudzvanya. Funga nezve izvi zvinhu zvitatu zvakakosha paunenge uchigadzirisa meta tsananguro:
Ita shuwa kuti mavara ezvinyorwa haasviki pamazita 160.
Ita kuti zvinyorwa zvinyorwe zvipfupi uye zvakananga kutarisa nezve zvemukati.
Sanganisira yakanangwa keyword uye yakakodzera mazwi.
Ichi chinyorwa chakatsanangura kuti nei zvemukati zvichikosha zveSEO uye izvo zvese zvaungaite kuti ugadzire injini yekutsvaga yakagadziriswa.
Ko kana zvese izvi uye zvakanyanya vanyori vanyori vakaita?
Nyanzvi vanyori vekunyora paSemalt havangotarisi zvako zvemukati chete asi voitawo shuwa kuti inonyudza rondedzero yeGoogle yekutsvaga mhinduro uye inopa kufarira kwemushandisi.
Bhizimusi rega rega kana muridzi webhusaiti anoda zvemukati mapeji ewebhu, mabloggi, masitepisi enhau, maratidziro, nevamwe.
Kana ivo vachiroja munyori wenguva yakazara, anogona / iye anogona kunge asina kukodzera bhajeti yavo. Uye, freelancer inogona kutora nguva yakawanda kuti igadzire zvemukati.
Iyo inogadzira kuvhiringidzika mupfungwa dzevazhinji vebhizinesi kana varidzi vewebsite, uye ivo havanzwisisi zvekuita.
Zvakanaka, haisi iyo mamiriro ezvinhu kuvhiringidzika asi kufunga nezve mhinduro / Semalt. Ivo vanyori vekunyora paSemalt vanove nechokwadi chekuti zvese zvemukati zvinodikanwa zvinotarisirwa nenzira chaiyo.
Dzimwe nguva uchizvidzikisira izvo zvirimo, vanhu vanoita zvikanganiso zvidiki zvinovhiringa yavo webhusaiti zvakanyanya. Kuti udzivise zviitiko zvakadaro, iwe unofanirwa kutora basa revanyori vaSemalt.
Semalt + Yepamusoro-mhando yezvinhu = Iwe uchave wakapfuma.